Huntersville Day Chirongwa - Hinds Feet Farm
Sangana nemabhuru edu ane hushamwari epurazi, Snickers uye Oriella!
Snickers akaberekerwa pano papurazi anenge makore mashanu apfuura. Iwe unogona kunge watofungidzira kuti akawana zita rake kubva kune yake caramel-ruvara fur, kunge mukati meSnickers candy bar! Akazara nehunhu uye anoda kunyura pa clover.
Oriella mutsva papurazi uye takapiwa nevaviri vevazvipiri vedu vanoshamisa. Iyi bhinzi inotapira yakatopinda mumoyo (nemaoko) yenhengo dzechirongwa chemazuva ese, vashandi uye vanozvipira. Zita rake rakafemerwa ne… wazvifungidzira… Oreos!
Pakati pevhiki, nhengo dziri kutarisira kudya uye kutarisira Snickers uye Oriella iyo inoisa mutoro uye inodzidzisa unyanzvi hwekuchengeta mhuka. Vari kurimawo miriwo nemiriwo mubindu kuti mabhera adye!
Kubatsira kwekurapa kwemhuka kunozivikanwa, uye mabheti aya haana mutsauko! Nhengo dzinofarira kubata, kupuruzira uye kutamba navo kunze kwematanga avo.
Tinoda kuti iwe uuye kuzosangana neSnickers naOriella. Ndapota tibatsirei kuvachengeta vaine hutano uye vachifara nekusaunza mamwe machira kuti vadyise, asi vanozogara vachigamuchira dzimwe mhuka dzinovaraidza!